Ukuzinikela 5 uhlelo:
Ukuzinikela kwebhizinisi elivulekile nokwethembeka
Inkampani engu-1.Our iqinisa ngokwakha ukwakhiwa kwezikweletu nokuzikhuza, ilandela umthetho ngokuqinile ekuvikelweni kwamalungelo nezintshisekelo zabathengi, yenza ngobuqotho izibopho zabasebenza ngebhizinisi, iveze ngokuzimisela ukuzibophezela kwebhizinisi ngokukholwa okuhle, iqinisekise ukuthi ikhwalithi yezimpahla nezinsizakalo, futhi ibeka nokuziphatha kwebhizinisi nezinsizakalo;
2.Ukuqinisekisa ikhwalithi yezimpahla zebhizinisi, uhlelo lwensiza yomsindo.Qamba amarekhodi womkhiqizo futhi uhlakulele ukuqwashisa komphakathi nedumela;
3. Sizosebenzisa ngokuqinile amasistimu wokudalulwa kolwazi kanye nemibiko yonyaka, futhi Sithuthukise ukuphathwa kwezikhundla zesikweletu.
4.Bhekisisa ukwakhiwa kwesiko lobuqotho ukuqinisa umphakathi kanye nokuholwa kokuvikelwa kwamalungelo abathengi.
Ukusungulwa kohlelo lokuhlola umphakathi kanye nokuhlaziya
1.Qalisa uhlelo lokuvakasha lokubuya kwamakhasimende, umnyango wokuhlinzekelwa kwamakhasimende wenza inhlolovo yokubuya nokubuya kwamakhasimende njalo, uqoqa ukuphawula kwamakhasimende neziphakamiso, bese usungula amafayela wokugculiseka kwamakhasimende. Uma kutholakala izinkinga, zixazulule ngesikhathi, bese wenza ukulungiswa okubucayi kokuthengisa okusebenzayo nabasebenzi bezinsizakalo;
2.Kumele sikwamukele ngenkuthalo ukuphathwa komphakathi kanye nemibono yomphakathi, silalele ngenkuthalo imibono kanye neziphakamiso zomphakathi, futhi senze ngenkuthalo imisebenzi yokuhlola umphakathi nokuhlola.
Sungula uhlelo lomkhiqizo kanye nensizakalo yekhwalithi yensiza
Inkampani engu-1.Our ithengisa umkhiqizo, isebenzise okokugcina kanye nohlelo lokuphatha isoftware ukuhlanganisa ukwabiwa, isinyathelo sokuhlola ikhwalithi ngesinyathelo sokuvikela konke kuthinta ikhwalithi yomkhiqizo isimo okufanele senzeke;
2.I nkampani inohlelo oluphelele lokuthengisa ngemuva kokuthengisa, isungule inqubo ephelele yokusombulula izinkinga zekhwalithi yomkhiqizo, futhi yasebenzisa indlela yokuphatha kuqala bese ithatha umthwalo wemfanelo. Qikelela ukuthi yonke iminyango ebandakanyekayo ohlelweni lokulawula ikhwalithi kufanele ifake ukuphatha isimo nokuhlaziywa kwenkinga ngendlela ebhaliwe, futhi uhlukanise ngokusobala izibopho zokugwema ukuphindeka kwezinkinga ezifanayo.
Sungula uhlelo lokuphendula ngokuthenga
Inkampani eyi-1.Our ilawula ngokuqinile ikhwalithi yenqubo yokuthengwa kwempahla, futhi yazisa uhlelo lwekhwalithi kanye nezidingo zohlelo lwezemvelo lwenkampani yethu kubahlinzeki, futhi iqoke abahlinzeki abaqeqeshiwe ukulawula ikhwalithi yemikhiqizo evela kumthombo.
Indlela yokuziphendulela ye-2Supplier, ukusungulwa kwendlela yokuhlinzekela ukuphakela kwabahlinzeki, ukuhlola ifektri, ukuhlolwa kwe-yokusungula, ukuhlolwa komkhiqizo ukwenqaba izinto ezingavuthiwe.
Inkampani eyi-1.Our iqoka indlela yokuzihlola, umnyango ngamunye usungula owawo uhlelo lokuqapha, uthwale ukuzihlola nokuzilungisa inkinga.
Iqembu ngemuva kokuthengisa lizocubungula futhi liphathe iminyango efanelekile ukuthi ibhekane nezinkinga ezivelayo.